Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-arụ ọrụ dị iche iche China Emeputa
Nkọwa:Njikọ nke,Aisle Light,Mbara Igwe Okporo Ụzọ
Njikọ nke,Aisle Light,Mbara Igwe Okporo Ụzọ
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ > Mbara Igwe Ochie > Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-arụ ọrụ dị iche iche
Ejiri okpukpu uhie nke igwe na-arụ ọrụ dị iche, nke dị elu, na-enwu ọkụ ruo ihe dị ka awa 15. 6V polycristalline silicon solar panels, 10W, na-etinye ihe karịrị awa ise nke ìhè, hụ oge ọkụ ọkụ oge n'abalị. Elu àgwà ikanam ìhè isi, inogide ọkụ. Owuwu okirikiri uhie
Ogwe ndị dị na mbara igwe, akụkụ akwụkwọ silicon polycrystalline nke a na-agba na-enwe nnukwu ụda ọkụ ọkụ, ọsọ ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ ọsọ n'ime awa ise. Debe oge na-egbuke egbuke n'elu awa 5 iji hụ na oge ọkụ na-acha ọkụ n'abalị. 14400mAh lithium ion batrị, na nnukwu ike ike, ogologo oge ọrụ ndụ na mma ka ntachi obi, na ndụ ọrụ nke 6-8 afọ. High quality LED imported chip light source, light uniform, inogide ọkụ.
Kwesịrị ekwesị maka okporo ụzọ, ụlọ, yard, okirikiri na ebe ndị ọzọ iji chebe ohere. Ọ bụ ezigbo ìhè ọkụ n'okporo ámá, ìhè awara ọkụ
Mkpokọta nke oriọna. Mgbe ọchịchịrị gasịrị, a ga-agbanye ọkụ ọkụ na-akpaghị aka, a ga-agbanyụ ọkụ ọkụ na-akpaghị aka n'ehihie. Enwere ike idozi ya site na ntuziaka aka. E nwere igodo kọmputa na oriọna oriọna. A ga-agbanyụ oriọna ahụ mgbe obere mkpirisi.
Mbara Igwe Okporo Ụzọ
Ntọala nke Ngwa